အနံ့မရသူ D6I4Gသန္ဓေပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက်နှုန်း (၁၀)ဆ မြန်နေပါသည်၊ ကာကွယ်ထားပါ၊ တစ်ခုချင်းတင်ပြပါမည် - Reader Choice
အနံ့မရသူ D6I4Gသန္ဓေပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက်နှုန်း (၁၀)ဆ မြန်နေပါသည်၊ ကာကွယ်ထားပါ၊ တစ်ခုချင်းတင်ပြပါမည်
အနံ့မရသူ D6I4Gသန္ဓေပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက် ၁၀ ဆ မြန်နေပါသည်.ကာကွယ်ထားပါ တစ်ခုချင်းတင်ပြပါမည်။ (Zawgyi Code ဖွငျ့ ဖတျမရသူမြားအတှကျ အောကျတှငျ ယူနီကုဒျဖွငျ့ ဖျောပွထားရှိပါသညျ)
၁.အားဆေး.ဗီတာမင် အီး စီ ဒီ သောက်ထားပါ။ ၂။အဖျားဝင်မလိုဖြစ်ရင် ပါရာစီတမော့ တစ်ရက် (၃) ကြိမ်သောက်ပါ ​ချောင်းဆိုးပြီဆိုရင် ဒက်စထရိုမီသောဖန် အိုင်ဗျူ ပရိုဖန် ဆေးအညွန်းအတိုင်းသောက်ပါ။ ၃။ ဆားရေ အာလုပ်ကျင်း.ရေနွေးသောက်..
ရေနွေးသောက်ရင်း အငွေ့ကို ရှူသွင်းပါ အခိုးအငွေ့ အငံအစပ်ဓာတ်နဲ့တွေ့ရင် ဝင်နေတဲ့ပိုး.တေပါတယ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပါ.အပူဓာတ်ပိုကြောက်တယ် အဆုတ်. မရောက်ဖို့ ဒီနည်းပဲရှိပါသည်
ဗိုင်းရပ်စ်သည် ဘယ်ကဝင်ဝင် လည်ချောင်းတွင်း ၄ ရက်ခန့်ကြာနေထိုင်ပါသည် ထို့ကြောင့် ပူသောအရည်ကော်ဖီ စွပ်ပြုတ် ရနွေး များများ ​သောက်ပြီး ကာကွယ်ပါဗိုင်းရပ်စ်ကို အစာအိမ်ထဲသို့ပို့ကာ အက်ဆစ်များဖြင့်အစာခြေခြင်းဖြင့်
အဆုတ်ထဲမဝင်အောင် တားဆီးပေးပါလိမ့်မည် ဖြစ်နိုင်ရင် ရှာလကာရည် သံပုရာရည် လိမ္မော်ရည် ဆားထည့် ​ရေနွေးပူပူဖြင့်.သောက်ပေးပါ တစ်ရက် တစ်ကြိမ်လောက်သောက်ပေးပါ ထမင်းစားရင် ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ အစိမ်းမြုပ်စားပါ
အပူ အခိုး.အငွေ့ဓာတ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ကို နိုင်သည့် ဓာတ်ဖြစ်ပါသည် အနံ့မရ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ပြရမှာ ဖြစ်ပါသည် ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရင်း ဆရာဝန် ဆရာမ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများကို ကူညီကြပါစို့လို့ အမျိုးတွေအား တင်ပြ လိုက်ပါသည် ရှင်
ကျွန်မ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ၄ လတိတိ တိုက်ပွဲဝင်ကုသပေးခဲ့ရသူ ခွဲစိတ် အထူးကု-.နောက်ဆုံးနှစ်က ဒေါက်တာနန်းခင်ညွန့်ပါရှင် ကျနော်အမျိုးများအားလုံးအခုဒိပိုစ့်လေးကိုအများသိ့စေချင်လို့ပါ ရှဲ ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ ခရက်ဒစ် စစ်သွေး
အနံ့မရသူ D6I4G.သန်ဓပွေောငျး.ဗိုငျးရပျဈဟာ ကူးစကျ ၁၀ ဆ မွနျနပေါသညျ.ကာကှယျထားပါ တဈခုခငျြး..တငျပွပါမညျ။
၁.အားဆေး.ဗီတာမငျ အီး စီ.ဒီ သောကျထားပါ။ ၂။ အဖြားဝငျမလိုဖွဈရငျ ပါရာစီတမော့ တဈရကျ (၃) ကွိမျသောကျပါ ခြောငျးဆိုးပွီဆိုရငျ ဒကျစထရိုမီသောဖနျ အိုငျဗြူ ပရိုဖနျ ဆေးအညှနျးအတိုငျးသောကျပါ။ ၃ ဆားရေ အာလုပျကငျြး.ရနှေေးသောကျ
ရနှေေးသောကျရငျး အငှကေို့ ရှူသှငျးပါ အခိုး အငှေ့ အငံအစပျ..ဓာတျနဲ့တှရေ့ငျ ဝငျနတေဲ့ပိုး.တေပါတယျ ဗိုငျးရပျဈပိုးကိုနိုငျတဲ့ ဓာတျပါ.အပူဓာတျပိုကွောကျတယျ အဆုတျ. မရောကျဖို့ ဒီနညျးပဲရှိပါသညျ
ဗိုငျးရပျဈသညျ ဘယျကဝငျဝငျ လညျခြောငျးတှငျး ၄ ရကျခနျ့ကွာနထေိုငျပါသညျ ထို့ကွောငျ့ ပူသောအရညျကျောဖီ စှပျပွုတျ ရနှေး မြားမြား သောကျပွီး ကာကှယျပါဗိုငျးရပျဈကို အစာအိမျထဲသို့ပို့ကာ အကျဆဈမြားဖွငျ့အစာခွခွေငျးဖွငျ့
အဆုတျထဲမဝငျအောငျ တားဆီးပေးပါလိမျ့မညျ ဖွဈနိုငျရငျ ရှာလကာရညျ သံပုရာရညျ လိမ်မျောရညျ ဆားထညျ့ ရနှေေးပူပူဖွငျ့.သောကျပေးပါ တဈရကျ တဈကွိမျလောကျသောကျပေးပါ ထမငျးစားရငျ ကွကျသှနျဖွူ ကွကျသှနျနီ အစိမျးမွုပျစားပါ
အပူ အခိုး.အငှဓေ့ာတျသညျ ဗိုငျးရပျဈကို နိုငျသညျ့ ဓာတျဖွဈပါသညျ အနံ့မရ ဖွဈလာပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျပွ ရမှာ ဖွဈပါသညျ ထို့ကွောငျ့ မိမိကိုယျကို ကာကှယျရငျး ဆရာဝနျ ဆရာမ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးမြားကို ကူညီကွပါစို့လို့ အမြိုးတှအေား တငျပွ လိုကျပါသညျ ရှငျ
ကြှနျမ ဗိုငျးရပျဈကို ၄ လတိတိ တိုကျပှဲဝငျ ကုသပေးခဲ့ရသူ ခှဲစိတျ အထူးကု-.နောကျဆုံးနှဈက ဒေါကျတာနနျးခငျညှနျ့ပါရှငျ ကနြျောအမြိုးမြားအားလုံးအခုဒိပိုဈ့လေးကိုအမြားသိ့စခေငျြလို့ပါ ရှဲပေးကွပါရနျမတ်ေတာရပျခံအပျပါသညျ ခငျဗြာ ခရကျဒဈ စဈသှေး